Sida hal mar loogu furo mareegaha badan ee Mac | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo furo shabakado badan hal mar Mac
Sida loo furo shabakado badan hal mar Mac
Casharadani waxa ay ku tusinaysaa habka degdega ah ee aad ku furto mareegaha badan oo laba dhagsi oo kaliya ah Chrome iyo Safari ee Mac. Haddii aad haysatid goobo aad maalin kasta booqato, khiyaamadani waxay kaa caawin doontaa inaad wakhti badbaadiso maalin kasta. Bal eega
Waxoogaa asal ah
Subax kasta markaan bilaabo shaqada iDB, waxaa jira mareegaha qaar oo aan runtii furo. Tan waxaa ku jira Slack web (si aan ula xiriiro tifaftirahayga), Trello (si aan ula socdo waxyaabaha), Naxwaha (si loo hubiyo oo loo saxo qoraalladayda), iDB's WordPress (in la abuuro qoraallo), Google (in la baaro), iLoveImg, iyo Squoosh ( loogu talagalay tafatirka sawirka).
Furitaanka nus darsinkan mareegaha ah mid mid waxay qaadan doontaa dhowr gujis. Oo maadaama ay tahay inaan furo iyaga maalin kasta, waxaan isticmaalaa khiyaamadan degdega ah si aan ugu shubo dhammaantood laba gujis oo keliya.
Sidee si toos ah loo furo mareegahan marka uu bilaabo Mac?
1) Gudaha shaashadda app-ka Shortcuts ee ugu horreeya, dooro jidka gaaban adigaa abuuray. Marka xigta, dhagsii "file” ka menu ka sare oo dooro Ku darso Dock.
2) Midig ku dhufo icon-ka-gaab ee kan Dock > Options > Ka fur Login.
Hadda laga bilaabo, mar kasta oo aad shido ama dib u bilowdo Mac kaaga, dhammaan mareegahan waxay si toos ah ugu furmi doonaan browserka caadiga ah. Waxaad ka beddeli kartaa browser-ka caadiga ah ee Mac Nidaamka Nidaamka > General.
Haddii aadan haysan macOS Monterey, halkan waxaa ah siyaabo kale oo degdeg ah oo lagu furo mareegaha badan ee Chrome iyo Safari ee Mac.
Sida loo furo shabakado badan hal mar Chrome
Xeeladda ka dambeysa tani waa in la calaamadeeyo mareegaha loo baahan yahay oo lagu daro galka buugga. Markaad midigta gujiso galka bookmarks, waxaad arkaysaa ikhtiyaarka aad ku furto dhammaan boggaga ku qoran galkan. Habka oo dhan waa sahlan yahay, sida ka muuqata tillaabooyinka hoose:
1) Booqo mareegaha ka dib marka ay soo gasho, dhagsii astaanta xiddig > Ku dar calaamad oo si ikhtiyaari ah u sii website-ka magac ku habboon, gaaban.
2) Ka dib markaa, guji Liiska hoos-u-dhaca galka > Dooro Folder kale.
3) Riix Faylka Cusub > u bixi magac kasta > Save. Waxaad si guul leh u abuurtay galka bookmarks oo aad ku dartay degelkii ugu horreeyay.
4) Waxaad ku arki doontaa galka bookmark ee dhinaca sare ee bookmarks. Haddii aadan, dhag sii falaar yar Ka soo cidhifka midig ee barta bookmarks oo jiid galka aad abuurtay dhinaca bar-bookmarks. Hadda booqo bogga labaad > astaanta xiddig > Ku dar calaamad > hubi inaad dooro galka aad ku abuurtay talaabada 3. Raac nidaamkan si aad ugu darto dhammaan shabakadaha loo baahan yahay galka buug-yaraha.
Tip: Aad uma jecli bar bookmark-ka marka aan ku jiro bogga mareegaha sababtoo ah waa wax laga xumaado in aan haysto xadhig yar oo shaashadda guryaha ah. Kaliya waxaan ka helaa bogga bilowga. Haddii aad dareento isku mid, riix Command + Shift + B si ay u qariyaan ama u muujiyaan bar bookmarks sare.
5) Wax walba hadda waa la dhigay. Midig ku dhufo galka bookmarks laga bilaabo barta bookmarks oo dooro Fur Dhammaan si loo furo dhammaan mareegahaas. Waxa kale oo aad gujin kartaa galka bookmarks marka aad hayso Command furaha si aad u furto dhammaan goobaha hal mar.
Talo Wacan: Waxaan jeclahay in aan Slack ku hayo tabka bidix, Naxwaha ku xiga, ka dibna WordPress, iyo goobaha hadhay intaa ka dib. Si aad u dejiso sida ay u furmaan tabsiyadan, hal mar dhag sii galka bookmark si aad u aragto dhamaan mareegaha lagu daray. Hadda, kor ama hoos u jiid si aad dib ugu habeeyaan booskooda. Midka sare wuxuu ka furmi doonaa tabka bidix.
Sida loo tirtiro galka bookmarks ee Chrome
Mar kasta oo aad dareento inaadan u baahnayn galka buugga, midig-guji magaciisa oo dooro delete. Tani waxay meesha ka saari doontaa galka iyo dhammaan bookmarks ee lagu daray. Sidoo kale, midig-guji goobta lagu daray galka si aad u tirtirto ama aad wax uga beddesho.
Waa inuu akhriyaaSida loo dejiyo Google Chrome si otomaatig ah u buuxiyo furaha sirta ah meel kasta oo iPhone kaaga ah
Sida deg deg ah loogu furo mareegaha badan ee Safari ee Mac
1) Fur Safari, oo laga bilaabo bar menu-ka sare, dhagsii bookmarks > Ku dar Folder Bookmark.
2) Sii galka magac aad rabto.
3) Booqo mareegaha, dhig tilmaanta jiirka ciwaanka mareegaha oo u jiid galka bookmark ee bidixda.
Haddii aadan taas samayn karin, dhagsii wadaag icon > Ku dar jadwalka.
Sida ku cad "Kudar boggan, "ku dhufo menu-ka-joojinta, dooro galka aad hadda ku abuurtay tallaabada 2, oo dhagsii Add.
4) Ku soo celi talaabada 3 si aad ugu darto shabakado badan galkan.
5) Si aad u wada furto dhammaan mareegahan, dhagsii icon leydi yar dhanka kore ee bidix si aad u muujiso dhinaca Safari.
6) Riix bookmarks > midig-guji galka oo dooro Ku fur tabs Cusub.
7) Talada ProTallaabooyinka 5 iyo 6 waxay u ekaan karaan wax badan in la sameeyo mar kasta. Markaa fur bogga bilowga Safari (tabo cusub) oo ka jiid galka dhinaca dhinaca ugu cadcad qaybta. Laga soo bilaabo halkan, kaliya riix-guji si loo furo dhammaan mareegaha. Waxa kale oo aad gujin kartaa galka bookmark marka aad riixdo Command furaha si aad u furto dhammaan goobaha lagu daray. Tani waa mid aad u fiican, waxaanan ku sameeyay isla Mac-gayga.
noteGalka Bookmarks-ka wuxuu la mid noqon doonaa iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga sidoo kale. Qalabkan, waxaad riixi kartaa galka bookmarks oo dooro Ku fur tabs Cusub si ay hal mar u wada shubaan mareegahaas.
Sida loo tirtiro galka Bookmarks ee Safari ee Mac
Si aad u tirtirto galka bookmarks ee Mac, ku dhufo midigta oo dooro delete. Waxaad tan ka samayn kartaa dhinaca dhinaca Safari ama Bogga Start ee hoos yimaada qaybta Favorites.
Waa inuu akhriyaa: 12 Safari kiiboodhka gaaban ee ay tahay inaad ogaato
Sida loo isticmaalo Shortcuts ee Mac si loo wada furo dhowr shabakadood
Laga bilaabo macOS Monterey, Mac wuxuu leeyahay app Shortcuts (sida iPhone iyo iPad).
Isticmaalka kan, waxaad dhisi kartaa jid-gaaban oo fudud oo furi doona dhammaan mareegaha lagu daray laba dhagsi oo keliya. Waxaad xitaa si toos ah u furi kartaa marka uu Mac ku shaqeeyo ama dib u bilaabo. Looma baahna in la gujiyo hal badhan!
Waa kuwan sida loo sameeyo marin gaaban Mac si loo furo dhowr shabakadood hal mar:
1) Fur fur tuuryo app ku yaal Mac-kaaga ku shaqeeya macOS Monterey. Sida caadiga ah, waxay ku dhex taal galka kale ee Launchpad ama galka Codsiga. Waxa kale oo aad riixi kartaa Command + Space Bar oo raadi.
2) Click ah oo lagu daray icon.
3) Laga bilaabo dhanka midig, dhagsii Web.
4) Jooji Fur URLs ficilka bidix ama guji (i) > Kudarso Gaaban.
5) Ka guuri xiriirka la rabo biraawsarkaaga ama meel kasta oo aad haysato oo ku dheji goobta URL qaybta. Haddii aad rabto, sidoo kale waxaad gacanta ku qori kartaa cinwaanka goobta halkan.
6) Imtixaankaygii, waxaan ku ogaaday inaad kala saari karto URL-yo dhowr ah oo leh comma gudaha isla fal URL-yada Furan. Laakiin si sahlan, muuqaal nadiif ah iyo tafatir mustaqbalka ah oo aan dadaal lahayn, way fiicnaan lahayd ku dar fal URL-yada Furan mar kale. Samee taas iyo ku dar URL labaad. Ku soo celi tan inta URL ee aad rabto. (Fiiri sawirka hoose)
7) Si aad u tijaabiso, dhagsii saddex xagal yar. Waxay ku weydiin doontaa oggolaanshahaaga si aad u furto biraawsarkaaga Mac ee caadiga ah. Guji U oggolow.
8) Ku soo noqo shaashadda abka Shortcuts oo bixi marin-gaabeedka magac kasta oo aad rabto.
9) Marka xigta, guji astaanta goobaha bidixda kore ee kore. Laga soo bilaabo halkan, waxaad dooran kartaa inaad ku dhejiso gaaban ee bar menu-ka sare, u isticmaal ficil degdeg ah markaad wax sax ah ku dhufatid ama aad ku darto Bar Bar, Finder, iyo Menu Adeegyada. waan jeclahay Kudar Gaaban Kiiboodhka doorasho. waan habeeyey Command + Option + A si loo furo jidkan gaaban. Waxay ka shaqeysaa ficil ahaan meel kasta. Waxaad dejin kartaa isku dhafka muhiimka ah ee aad jeceshahay. Kaliya iska hubi in isku darka furuhu aanu horeba u samayn fal.
10) Click ah badhanka xidhitaanka cas si loo badbaadiyo oo looga baxo shaashaddan. Waxaad si guul leh u dhistay jidka gaaban Iyada oo ku xidhan meelaha aad ka suurto galisay talaabada 9, taabo furaha kiiboodhka, icon app Shortcuts ee ku yaala bar menu-ka, Summada Shortcuts ee ku dhex taal Bar taabashada ama meel kasta oo aad ku dartay. Dhammaan mareegaha marin-gaabni waxay isla markiiba ku furmi doonaan biraawsarkaaga caadiga ah ee Mac (Safari, Chrome, Firefox, ama browser kasta oo kale oo aad dejisay).
Laga soo bilaabo Ficilada Degdega ah
Ku soo duub
Hadda, waxaad taqaanaa sida loo isticmaalo khiyaamadan waxtarka leh si aad dhaqso ugu furto mareegahaaga caadiga ah. Kaliya iska hubi in aadan ku darin wax goobo aan loo baahnayn galkan, maadaama ay iyaguna furmi doonaan mar kasta. Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo arrintan la xidhiidha, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho.
La soco xigta:
Sida si toos ah loogu sameeyo tab cusub oo firfircoon Safari, Firefox, iyo Chrome
Sida loo isticmaalo kooxaha Tab ee Google Chrome si loo habeeyo tabs
15 tabaha iyo tabaha loogu talagalay bilowgayaasha macOS
Apple waxay soo saartay 'Tracker Detect' Android app si ay uga hortagto isticmaaleyaasha in lagula socdo AirTag
Apple waxay dib u dhigtay Kontoroolka Universal iPadOS iyo macOS ilaa Guga 2022